News Collection: हाकु कालेले पाए ५० हजार !
हाकु कालेले पाए ५० हजार !
सौगात मल्ल ‘लुट’मा बैंक लुट्ने मास्टरप्लान बुन्ने एक बाठा पात्रको भूमिकामा छन् । ‘लुट’ले पनि अलनेपाल र ओभरसिज गरि ३ करोडमाथि ग्रस मार्क गरिसकेको छ । पैसा चाहिएर बैंक लुट्ने अनि ‘लुट’लाई वाहीवाही दिलाउने स्वयम सौगातको भने पारिश्रमिक कति होला ? ५१ दिनको छेकोमा सौगातले मेरोसिनेमासँग एक्सक्लुसिभ पारिश्रमिक बताएका छन् । अचम्म लाग्न सक्छ –‘लुट’मा उनको पारिश्रमिक जम्मा ५० हजार मात्र हो ।
आर्मी अफिसर्स क्लबमा सिनेमाले सक्सेस भोज दिइरहँदा गफिएका मल्लले आफूले ‘लुट’बाट जम्मा ५० हजार मात्र पारिश्रमिक लिएको बताएका हुन् । सिनेमाले ५१ औं दिन मनाइरहँदा उनले आफ्नो कामको मूल्यांकन दर्शकले गरेको बताउँदै यसले आफूमा हौसला थपेको बताए । सफलता मिलेपछि त्यो कायम गर्नु ठूलो कुरा भएको बताउँदै सौगातले आफू विदेशी चलचित्रमा पनि काम देखाउन खोजिरहेको बताए ।
‘लुट’पछि धेरै अफर आइरहेको बताउँदै उनले यतिबेला ‘छड्के’मा व्यस्त भएको र ६ वटा स्क्रिप्टको पनि अध्ययन गरेको बताए । ‘लुट’को सफलताले रेट बढेको हो ? भन्ने जिज्ञासामा उनले आफ्नो रेट १० लाख पुगेको भन्ने बजारिया हल्ला आफूले पनि सुनेको बताउँदै त्यसभन्दा माथिको काम देखाउन सक्ने आत्मविश्वास बढेको उनले बताए । ‘पारिश्रमिक केही बढेको हो तर त्यति धेरै होइन’ चस्मा निकालेर उनले भने ।
अब पनि ५० हजारमा अफर आयो भने भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन् –‘५० हजारमा काम नगर्ने होइन गरिन्छ तर अब न्यायसंगत हुन्छ र ? उनले प्रतिप्रश्न गरे । ‘लुट’ले सफलता पाएपछि निर्माणपक्षले थप पारिश्रमिक दिने भनेको छ । हेरौं के हुन्छ उनले आशा पनि जगाए ।